Masaccicham : Madagascar South Africa Chamber of Commerce and Industry Ara-tantara - MasacciCham : Madagasikara Afrika Atsimo Antenimieran'ny Varotra sy ny Indostria
MasacciCham : Madagasikara Afrika Atsimo Antenimieran'ny Varotra sy ny Indostria > Mahakasika > Ara-tantara
Madagasikara Afrika Atsimo Antenimieran’ny Varotra sy ny Indostria na MASACCI dia fikambanana tsy miankina, tsy mitady tombombarotra, niorina tamin’ny Martsa 2014. Ny tanjony dia ny hampiroborobo ny tontolo sahanin’ny fandraharahana sy ny raharaham-barotra ho an’ireo orinasa maniry hampivelatra ny asany eto Madagasikara, any Afrika Atsimo ary manerana ny faritra.
Masacci dia miaro sy mampandroso ny varotra sy ny indostria eo amin’ny firenena roa tonta; mandray anjara amin’ny fanapahan-kevitra politika, manangona sy mizara amin’ny mpikambana ny vaovao rehetra ilaina, anisan’izany ny antontan’isa sy tahirin-kevitra eo amin’ny varotra sy ny indostria, ny tolotra mikasika ny raharaham-barotra misy eo amin’ny firenena roa tonta sy amin’ny firenena manodidina; Izy ihany koa dia manome torohevitra mahakasika ny loza sy ny olana mety mifandray amin’ny fahatokisana ny fampiasam-bola
Mipetraka ho “feon-ny mpikambana” ao aminy ny Antenimieran’ny Varotra sy Indostria manelana an’i Madagasikara sy Afrika Atsimo. Tompon’antoka izy fa ny tombontsoan’ny mpikambana ao aminy dia ho re, azo ary voahevitra eo amin’ny fikasana ny tombontsoa ara-toekarena sy ara-barotran’ny firenena roa tonta; i Masacci dia manampy amin’ny fanapariahana ny fivoarana sy ny fifaninanana avy amin’ny sehatra tsy miankina.
Mampirisika ny fandraisana andraikitra ara-tsosialy sy ny endrika tsara eo anivon’ny vahoaka ho an’ny mpikambana ao aminy ny Antenimiera.